ညသိပ်ရေနွေး အဆိပ်ထက်ပြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ညသိပ်ရေနွေး အဆိပ်ထက်ပြင်း
Posted by Yin Nyine Nway on May 30, 2013 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 25 comments
ဒီဂနေ့ဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာအုပ်ကြော်ငြာလေးတစောင် နာမည်က
ညသိပ်ရေနွေးဆိုလို့ အနော် ကြုံဖူးတဲ့ ဘ၀ပေး သင်ခန်းစာလေးတခုကိုအမှတ်၇လိုက်လို့ပါ
အနော် တောင်ကြီးမှာ နေတုန်းက အနော်တို့လူမျိုးတွေက ရေနွေး သပ်သောက်ကြတယ်
အခါးရည်ဆိုတာ ဒီမှာတော့ အရက်လို့ပြောတာပဲ
အဲ အခါးရည်ကို အိမ်လာတဲ့ လူတိုင်းကိုတိုက်တယ်
မပါမဖြစ်… အိမတအိမ်တက်ရင် အနည်းဆုံးတော အခါးရည်လေးတော့ တိုက်ကြတာကြီးပဲ
အဲမှာ အနော့် အဒေါ်ကတော့ အသောက်နိုင်ဆုံးလူ အဖြစ်သတ်မှတ်ရမယ်
ဘာလို့လဲဆို အဒေါ်က မိုးလင်းမိုးချုပ်ထိသောက်တယ် …ရေဆာလဲသောက်တယ်… ထမင်းစားလဲသောက်တယ် … အားနေရင်းကို သောက်နေတော့တာပဲ
ရေနွေးတအိုးကို ဘယ်လောက်မှ မရှိသေးဘူး ကုန်ပြီ တနေကုန်လဲ ရေနွေးတည်နေတယ်
အဲမှာစတာပဲ အဒေါ်ေ၇နွေးစွဲတော့ မနက် မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်တာနဲ့ သောက်တော့တာပဲ
အဲမှာ ညသိပ်ရေနွေးတွေကို သူက တ၀ကြီးထိုင်သောက်ပြီးမှ လုပ်စရာချိတာလုပ်တယ်
တနေ့မှာတော့ အနော့် အဒေါ်က ဗိုက်အောင့်အောင့်လာတယ်
ဒါနဲ့ပဲ တောင်ကြီးက စိန် အထူးကု ဆေးခန်းမှာပြပါလေရော
ဗိုက်အောင့်တာနဲ့ပဲ အစာအိမ်လို့ပြောပြီး ခွဲဖို့ပြင်တော့တယ်
ကံကောင်းချင်တော့ တောင်ကြီးမှာ ပစ္စည်းမစုံတာကြောင့် မန္တလေးကို ပြောင်းရပါလေရော
မန္တလေးကလည်း မစစ်ဘူး တောင်ကြီးက ရမ်းတုတ်ထားတဲ့အစာအိမ်ဆိုတာနဲ့ပဲ အစာအိမ်ခွဲဖို့ပြင်ရော
အဲမှာ အဒေါ်က ကံကောင်းသွားတာက မန္တလေးရောက်နေတဲ့ အသည်းဆရာဝန်ကြီးတယောက်နဲ့ ခင်လိုက်တယ် ( နာမည်ကို အနော်မသိ)
အနော့ အဒေါ်က ကျောင်းအုပ်ဆိုတော့ ဖောင်ကြီး သင်တန်းလို ၀န်ထမ်းရေးရာ တတ်တုန်းက ခင်ခဲ့လို့ပြောပြတယ်
ဆရာဝန်ကြီးက အစောရေ ဘာဖြစ်တာလဲ မေးတော့ အဒေါ်က ဗိုက်အောင့်နေကြောင်းပြောပြတယ်
ဆရာဝန်ကြီးက အောင့်တဲ့နေရာ သေသေချာချာပြ ဆိုပြီး ဓါတ်မှန်တွေရိုက်ခိုင်း အာထှာဆောင်းတွေရိုက်ခိုင်းပြီး
မခွဲဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တယ် ….
အဖြေ သိရတာကတော့ အဒေါ်က အသည်းမှာ စကာပေါက်ဖြစ်နေတယ်တဲ့
အဲမှာ ဆရာဝန်ကြိးက အဒေါ်ရဲ့ တနေ့တာ စားသောက်မှုကိုစစ်တော့ အဒေါ်က ညသိပ်နေနွေးကို နှစ်နဲ့ချီအောင် သောက်ခဲ့လို့ဖြစ်တာလို့ရှင်းပြတယ်
လက်ဖက်ခြောက်ကို 6နာရီကျော်ကြာအောင် စိမ်ထားတာဟာ အဆိပ်ထက်တောင် ပြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
လက်ဘက်ကို စတင်သောက်သုံးကြတဲ့ ကိုကိုတရုတ်တွေကတော့ တခါသောက်လေးသာ ခတ်သောက်တာပါတဲ့
ဒီမှာလို ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်ပြီး မစိမ်ပါဘူးတဲ ဂျာ
ရေနွေးဖြူကိုသာ ထည့်ထားပြီး ဧည့်သည် ဖြစ်ဖြစ် သူတို့သောက်မှသာ ခွက်ထဲကို လက်ဖက်ခြောက်ထည့်ုပြီး ရေနွေးအဖြူကိုရောတာပါတဲ့
ဒိကလူတွေကတော့ ရေနွေးကို ဓါတ်ဗူးနဲ့ ထည့်တည်ပြီးသောက်ကြပါတယ်
ဓါတ်ဗူးက ဓါတ်သားမှာပါတဲ့ ပြသားတွေရယ်ကြောင့် အသဲကို ပျက်စီးစေတာပါတဲ့…..
နောက်တခုကတော့ ပက်စီလို့ခေါ်တဲ့ ဖျော်ရည်တွေမှာပါတဲ့ Gas တွေပါ
အနော် Duty Free ဆိုင်မှာလုပ်တုန်းက သင်ခဲ့ရပါတယ်
ရိုးရိုးလိမ္မော်ရည်ထဲကို Gas တမျိုးထည့်လိုက်တာနဲ့ လိမ္မော်ရည်တွေဟာ အေးမြနေတော့တာပါပဲ
လိမ္မော်ရည် 1ပုံမှာ Gas က 9ပုံပါပါတယ်
အဲဒီ Gas က အသည်းနဲ့ အဆုတ်ကို ပျက်စီးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ဒါကြောင့် Gas မပါတဲ့ သဘာဝဖျော်ရည်လေးတွေကိုသာ သောက်သုံးသင့်ပါတယ်
အနော်နဲ့ခင်တဲ့ စာရေးဆရာ တယောက်ချိပါတယ်
သူကတော့ ညနေတိုင်း အရက်သောက်လေ့ချိပြီး သူ့တပည့်ကတော့ အဖော်အဖြစ် နေ့တိုင်းလိုက်ထိုင်ပေးပါတယ်
ဆရာကြီးသောက်သလို တပည့်က မသောက်တတ်ပေမဲ့ ဆရာနဲ့အတူတူနေ့တိုင်း လိမ္မော်၊ ကိုလာ စတာတွေကို တခုမဟုတ် တခုသောက်ပါတယ်
နေ့တိုင်း အရက်သောက်တဲ့ ဆရာတောင် ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး
Gas ပါတဲ့ဖျော်ရည်တွေ နေ့တိုင်းသောက်တဲ့ တပည့်လေးကတော့
နောက် 1လ အကြာမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်
ဒါ့ကြောင့် ပူုပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီမှာ အအေးသောက်ရင်
သဘ၀ Gas မပါတဲ့ဖျော်ရည်တွေကိုသာ သောက်သုံးသင့်ပါကြောင်းနဲ့
ညသိပ်ရေနွေးတွေကိုလည်း မသောက်မိစေဖို့ သတိပေး ဆန္ဒုပြုလိုက်ပါတယ်
အိုးမိုင်ဂေါ့ ကြောက်ချာဂျီး.. ပါလား
ဟုတ် ဆြာအုပ်ရေ ….
အလကားလိုက်တိုက်တဲ့ ဖျော်ရည်လည်း ကြည့်သောက်မှ ဖြစ်မယ်ထင်ပါ့….
တန်ဆေး လွန်ဘေးလေ …
ကျေးဇူးပါ Yin Nyine Nway ရေ။ ကြားတော့ကြားဖူးနေတာ ခုမှပဲသေသေချာချာဖတ်ရတော့တယ်။ ဖားသား ကြီးလဲသတိပေးအုန်းမှပဲ။
ဟာ ဒီဆောင်းပါးလေးက တိုပေမယ့် ကျနော့်အတွက်တော့ ကောင်းတယ်ဗျ။ ကျနော်လဲ ညသိပ်ရေနွေးတွေ တခါတလေ သောက်တတ်တယ်။ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ ဖတ်ဖူးပေမယ့် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပဲ သတိမမူပဲ နေခဲ့တာ။ နောက်ဆို မလုပ်တော့ဘူး။
ဘယ်နှယ့်လိုဗျာ ( စကားမပီချင်ဟန်ဆောင်ကြပါ )
အံ့သြ တုန်လှုပ်မိပါရဲ့… :buu:
သန်းကျူး .. ရှဲရှဲ …
ကျုပ် ဘိုးတော်က တစ်ခါတစ်ခါ ဒီလို သောက်တတ်တယ် ..
သူ့ကို လှမ်းပြီး သတိပေးရအုံးမယ် …
Drinking Hot Water or Tea Before Bed?
Hot water with tea is beneficial to your health and can be consumed all day. Water is not the life source without good reason. The problem is that as the COLD drinks pass through our system, they solidify the fats from the foods we have just eaten or are eating at present. This makes the body find it harder to digest and disperse the unwanted fats from our body. However, most of us don’t MAKE TIME to drink tea during the day. If we simply swap our cold drinks forawarm drink (warm water/tea/herbals) the warm fluids help the fats in our foods to remain fluid and so easing the digestive system and helping the fats pass through our body and reduce risk of clogged arteries
By any means needed, do not drink your water from the water heater because it contains metals that can be dissolved by hot water. Some pipes in your home may have lead soldering, which also can be dissolved by hot water. Add to that the fact that municipal water impurities collect and precipitate in the bottom of your hot water heater.
If you are going to be drinking hot water, make sure it is as clean as your cold drinking water. I boil spring water just to be double protected. There are many who drink from the tap and if that’s what your comfortable with then so be it.
The Purifying Effects of Drinking Hot Water
Here is how it works. If you drinkaglass or two of hot water, you increase your body temperature slightly. Your body, in order to maintain your temperature around 98.6 degrees, will begin to sweat to cool itself down. The sweating induced by drinking hot water helps purify your bloodstream by flushing toxins out of your body. It is reported that drinking hot water also helps remove deposits in the nervous system that haveanegative effect on your thoughts and emotional responses. By drinking hot water, you are able to purify your body and mind, creatingabalance that will make you feel healthier and think more clearly. In all things you do it your daily life, say to yourself, “did I detox today”. Everyday isadetox day. Especially at night while sleeping. If you drink tea or hot water at night helps with the following
Benefits of tea before bed:
1. Raises the metabolism and increases fat oxidation.
2. Reduces the risk of heart diseases and heart attacks by reducing the risk of trombosis (blood clotting).
3. Reduces the risk of esophageal cancer (cancer in the long hollow tube that runs from your throat to your stomach).
4. Inhibits the growth of certain cancer cells, reduces the level of cholesterol in blood, improves the ratio of good cholesterol to bad cholesterol.
5. Treat rheumatoid arthritis and cardiovascular diseases
6. Treat impaired immune function. .
7. Some researches show that, drinking bitter teas like Green Tea regularly may help prevent tooth decay by killing the bacteria which causes the dental plaque.
Essentially it does matter what kind of tea you drink before you rest. Just as long as you raise your body temperature enough so that u sweat is what matters. Be well.
လဖက်ခြောက်ကို.. ဘယ်လောက်နှပ်ရမယ်ဆိုတဲ့.. ဇယားကိုရှာတွေ့တာနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ကျုပ်သိသလောက်.. လဖက်ခြောက်ကို ၆နာရီစိမ်ထားလည်း..အဆိပ်မဖြစ်ပါဘူး..
ဘာလို့လည်းဆိုတော့.. လဖက်ခြောက်နှပ်ထားတဲ့အရည်ကို.. အပူရောအအေးရော.. သံဗူး.. ပလပ်စတစ်ဗူးတွေနဲ့.. ရောင်းဝယ်နေကြလို့ပါပဲ..
အိမ်မှာ တစ်မိသားစုလုံး လက်ဖက်ရည်အခါး (ရေနွေးကြမ်း) ပဲ သောက်ကြတယ်။
၆နာရီထက် ပိုနှပ်မိသလို၊ ညသိပ်လည်း သောက်ဖြစ်ကြတယ်။
အဖေကလည်း CA Liver နဲ့ ဆုံးသွားတာဆိုတော့……
သဂျီးပြောသလိုတော့ ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေသား..
သို့ပေမဲ့ … အနော့် အဒေါ်ဂျီးက ဘာနဲ့ ဆုံးတာလဲဟင် ဒါဆို
အသည်းဆရာဝန်ပြောတာကော ဟုတ်ဘူးလားဟင် သဂျီး…
အနော် ကန့်ကွက်တာမဟုတ်ပဲ သိချင်လို့မေးတာပါချင့်
ကြွေအိုးက ဘာသတ္တိမှ မထွက်တာ ကို
မြန်မာပြည်မှာ.. အသည်းရောဂါဖြစ်စေတဲ့.. အခြေအနေတွေအရမ်း(အရမ်း)များပါတယ်..
အေ ဘီ စီ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ…
ဒါတွေကြောင့်.. လူ၁၀၀သေရင်..(အနည်းဆုံး) ၁၀ယောက်က အသည်းရောဂါလို့သေချာမှာပါ..။
((ယူအက်စ်မှာ မြန်မာပြည်ကအခြေချသူတွေလာလာသေနေတာ.. သိသလောက်.. လူ၁၀ယောက်သေရင်.. မေးကြည့်လိုက်.. ၅ယောက်က အသည်းဖြစ်နေပါကြောင်း..))
စကားအတင်းစပ်ပြောရရင်.. မြန်မာလူမျိုးနဲ့.. အသည်းရောဂါဟာ..
ဓါတ်ဗူးဆိုတာ.. ပုံမှန်အားဖြင့်.. ဖန်သားနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပြီး.. အပြင်ကနေ ပြဒါးကို.. အပူမလွင့်မယိုအောင်.. သုတ်ထားတာပါ…
အထဲမှာရောထားတာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့.. ပြဒါးနဲ့.. အထဲကအရည်ထိနေနိုင်တယ်ဆိုရင်.. ဓါတ်ဗုးကွဲနေမှသာဖြစ်မယ်ထင်ပါကြောင်း…
Arizona Diet Iced Tea with Lemon Flavor
Case Count:4per case $28.76
အဲဒီအပေါ်ကမြင်ရတဲ့.. ရေအေးကြမ်းပလပ်စတစ်ဗူးကို.. အနည်းဆုံးတပါတ်ထားသောက်ကြတယ်..။
ဟိုး ရှေးတုန်းကလို ကြွေခရားအိုးထဲ ရေနွေးထဲ့ လဘက်ခြောက်ခပ့်ပြီး အပူကြာရှည်ခံ အ၀တ်သေတ္တာလေးထဲထဲ့ ပြီးသောက်ကြရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။
ပိုစ့်ရေးတဲ့သူ စေတနာကိုတော့ လေးစားတယ်ဗျာ။
အကိုးအကားလေးနဲ့ ဖတ်ဖူးသမျှထဲက မျှဝေရေးချင်ပေမယ့် ဒေဝေါကြောက်လို့ မရေးတော့ပါဘူးလေ။
အိုက်ဒါ နဲနဲထူးဆန်းတယ်။ ရုံးက ဘိုးတော် ၂ပါးလုံး ရေမသောက်ဘဲ Coke နေ့တိုင်းသောက်တာ ကျုပ်သိသလောက် ၂နှစ်ကျော်ဘီ သံဗူးလား ရဲ့ …။ သေတဲ့လူမှာ တခြားရောဂါတခုရှိနှင့်ပီးသားဖြစ်နေအုံးမယ်။
အနော် ဒီဇိုင်းဆရာ ကိုနေ၀င်းအောင် ဆီမှာလုပ်တုန်းကပါ
ဆရာ ကိုမင်းလူရယ်၊ ဆရာ အကြည်တော်တို့နဲ့ခင်ရင်း
ဆရာအကြည်တော်ကို ကိုမင်းလုက အရက်လျော့သောက်ဖို့ပြောရင်း
ဆရာအကြည်တော်က သူ့ ဖြစ်ရပ်လေးတခုပြောပြခဲ့ပါတယ်
နောက် အနော် Duty Free Shop မှာ developer ၀င်လုပ်တော့ အနော်တို့ ကုမ္ပဏီက
Yose သံဗူးတွေ တင်သွင်းတုန်းက သင်ခဲ့ရပါတယ်
အဲမှာ ပါနဲက Carbonate Gas တွေက
အနေ်ာလည်း မစမ်းဖူးသေးလို့ မသိတေးဘူးယောင်းမယေ…
(ကြည့်မရတဲ့ ရုံးကလူကို နေ့တိုင်းတိုက်ပြီး သတ်မလို့ :P)
ဆိုဒါသောက်လို့ သေဂျေးဆို အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လူတဂေါင်မှ ရှိမှာဟုတ်တော့ဗူးကွဲ့.. ခုနောက်ပိုင်းမှ ဂက်စ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေ မသောက်ဖို့ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ခလေးတွေကို ပညာပေးလား၊ အစိုးရကျောင်းတွေမှာ ဆိုဒါ ရောင်းခွင့် တားမြစ်လာတာ.. အရီးလတ်ပြောတဲ့ ဂျင်န်နရေးရှင်း အိပ်စ်၊ ဝိုင် အားလုံး အနည်းနဲ့အများ သောက်သုံးသူတွေချည်းပဲ…။ နောက်ထွင်တဲ့ ဒိုင်းယက်ဗားရှင်း ဆိုဒါကလည်း အရသာ ဖွယ်တယ်တယ်ဂျီး.. သောက်လို့ကောင်းဗူး.. ဒါကြောင့်ထင်ရဲ့ သောက်ရေသန့်ဈေးကွက် သိပ်ကျယ်ပြန့်လာတယ်… ဆိုဒါအချိုရည်နဲ့ ဈေးအတူတူဗဲ…။ အခုမျိုးဆက် ဂျင်န်နရေးရှင်းဇက် ကတော့ ပြင်လို့ရဂေါင်းပါရဲ့… ဒါတောင် အပြိုင်လွန်ဆွဲရမှာ…သောက်လို့ ကောင်းဒါဂိုး..။ ဂက်စ်မပါတဲ့ ဟာကြတော့လဲ ဗာထူးလဲ သကြားများတာနဲ့ ဆားများတာနဲ့ သဘာဝမဟုတ်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေ ပါတာနဲ့… သောက်လို့တော့ သေနိုင်ဗူး သို့သော် လူဝစေတာ သေချာတယ်…။ မယုံရင် စွဲသောက်ကြည်.. ဗိုက်ခေါက်ထူလာမယ်။ ငယ်ငယ်လေးထဲက ပုံမှန်ထက်ပို သောက်လာသူဆိုရင် ကြီးလာတဲ့အခါ အသားသေပြီး ဝိတ်ချမရ ဖြစ်တတ်တယ်…
ရေနွေးကြမ်း ကတော့ အဆီကျတာတော့ အမှန်ပဲ..
အဘိုး က အခုတော့ သေ သွားပြီ.. သူ အသက် ၉၄နှစ် အထိ ဆေးခန်း ဆေးစစ်လိုက်တိုင်း နှလုံး အဆီ သွေး အဆီ လုံးဝ မရှိဘူး။
သေခါနီး အထိ ၀က်သားဆို အဆီတုံးမှ စားတယ်။
ဟင်းဆို အဆီရွဲမှ ကြိုက်တယ်။ သွားမကောင်းတော့ ဆီ နဲ့ အိနေအောင် ချက်ထားမှ စားလို့ ရတာလည်း ပါတယ်။
သူကတော့ မနက် မိုးလင်းတာနဲ့ ရေနွေးအိုးတည် လက်ဖက်ခြောက် လက်တဆုတ် အိုးထဲ ပစ်ထည့်ပြီး တနေကုန် သောက်တာ.. တနေကုန်သွားရင် အဲ့ဒီ ရေနွေးအိုးထဲ ရေနွေးရောသောက်တယ်။ ညနေမိုးချုပ် အထိပဲ.. ညသိပ်ရေနွေးတော့ မသောက်ဘူး။ အဲ့ဒီ အတွက် အသဲပြသနာ မရှိပဲ အဆင်ပြေသလားတော့ မသိဘူး။
ညသိပ်မဟုတ်ရင်တော့ ဆိုးကျိုး မရှိဘူး ယူဆပါတယ်။
ဓာတ်ဗူးထဲမှာ လ္ဘက်ခြောက်ခပ်ထားတဲ့ ညသိပ်ရေနွေးမှာ လ္ဘက်ခြောက်မှာပါတဲ့ဒြပ်နဲ့ ဓာတ်ဗူးဓာတ်သားက ဒြပ်တွေ အချိန်ကြာတော့ ဓာတ်ပြုပြီး သဘာဝပြောင်းသွားလို့ ဆိုချင်တာပါ။
အဲဒီမှာလဲ ဓာတ်ဗူးထဲက ရေနွေးက မပူတော့ဘဲ အပူနှုန်းကျပြီး အေးသွားမှ ဒြပ်သဘာဝ ပြောင်းသွားတာပါ။
နောက် အချိုရည်ထဲက Gas ကိစ္စမှာလဲ အချိုရည်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူး အခုပိုစ့်မှာ ညွှန်းထားတဲ့ ပက်စီကတော့ မသောက်သင့်တဲ့ထဲပါတယ်၊ အဲဒီအချိုရည် နဲ့ ပါရာစီတမော နဲ့မတည့်ဘူး ရှော့ရှိတယ်၊ မယုံရင် ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ ကျန်တဲ့ အချိုရည် တွေဆို မဖြစ်ဘူး၊ အဲဒါဆိုဘာလို့လဲ စဉ်းစားကြည့်ကြလေ သူထဲမှာ အခြားအချိုရည်မှာ ပါတဲ့ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ မတူတာပါလို့ဘဲပေါ့။ ဒါကြောင့် Gas ပါတဲ့ အချိုရည်တိုင်း မဟုတ်ပါဘူး Gas ပါတဲ့ အချိုရည်သောက်လို့ သက်တန်းတိုကာသေရ မယ်ဆို နိုင်ငံခြားက သူတွေခက်ရချည်ရဲ့ဗျာ။
” ရေနွေးကို ဓါတ်ဗူးနဲ့ ထည့်တည်ပြီးသောက်ကြပါတယ်
အဲမှာ လက်ဖက်ခြောက်ရယ် ဓါတ်ဗူးက ဓါတ်သားမှာပါတဲ့ ပြသားတွေရယ်ကြောင့်
အသဲကို ပျက်စီးစေတာပါတဲ့ ”
ပြဒါး ကတော့ ၊ သူတစ်ခုတည်းနှင့်တင် ၊ အဆိပ်ရှိပါတယ် ။
လက်ဖက်ခြောက် နှင့် ဓါတ်ပြုစရာတောင် မလိုပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဓါတ်ဗူး တည်ဆောက်ပုံ အရ ၊
ဓါတ်ဗူး မှာပါတဲ့ ပြဒါးက ၊ ရေနွေး နှင့် ထိစရာ ကိစ္စမှ မရှိတာ ။
အသည်း ဆရာဝန်ကြီး က ပြောတယ်တဲ့လား ။
” Gas ပါတဲ့ဖျော်ရည်တွေ နေ့တိုင်းသောက်တဲ့ တပည့်လေးကတော့
နောက် 1လ အကြာမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ပါတယ် ”
မှန်တာပြောရရင် ၊ အဘ ပုံမှန်အားဖြင့် ၊ ရေသောက်လေ့ မရှိပါဘူး ။
ထမင်းစားတဲ့ အချိန်ဆို စားပွဲထိုး ချပေးတဲ့ ရေနွေးကြမ်း / ကော်ဖီ သောက်လေ့ရှိပြီး ၊
ကျန်တဲ့ အချိန်တွေမှာ ( ကိုယ့်လက်နှင့် ကိုယ် ယူသောက်ရတဲ့ အချိန်တွေမှာ )
Gas ပါတဲ့ဖျော်ရည်တွေပဲ နေ့တိုင်းသောက်ဖြစ်ပါတယ် ။
( အချို ပါတဲ့ဖျော်ရည်တွေက သွား နှင့် ဆီးချို အတွက် မကောင်းမှန်း သိပေမယ့်
ချိုတဲ့ အတွက် သောက်ဖြစ်နေတာပါ )
အဲဒီလိုနေလာတာ ၊ နှစ်ပေါင်း ဆယ်ချီနေပါပြီ ။
ဘာမှတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး ။
တစ်ချို့ အညံ့စား ဓာတ်ဗူးတွေက ပြဒါးတွေကွာတယ် ကိုအဘဖော ရေ။
ဘယ်မှာ ဖြစ်နိုင်တော့ မသိ။
လက်ဖက်ခြောက်ကတော့ ပထမဆုံး ဦးရေကို သွန်ပစ်ရတယ် ကြားဖူးတယ်။
ဖုန်သလဲ ကင်းအောင် ထင်ရဲ့။